Makedonia: Nampifantoka ny maso teto amin’ny aterineto ny TEDxSkopje · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2010 14:10 GMT
Ny mpandray anjara niresaka momba ny lanonana TEDx tao Makedonia dia nihevitra azy avokoa ho fahombiazana tanteraka. Nahafahana niresaka tamin-kahalalahana sy nampisy aingam-panahy farafaharatsiny tamin'ny olona zato nandray anjara ho amin'ny fiovana tsara (miabo) ity valandresaka mahaleo tena kononina araka ny fanaon'ny fikambanana amerikana tsy miankina sy tsy mitady tombontsoa TED (Technology, Entertainment, Design na Teknolojia, Fialamboly, Haiendrika) maharitra iray andro ity.
Araka ny itateran'i [MKD] IT.com.mk dia:
Tapitra ny “fizaran-kevitra” voalohany. Azonao arahina mivantana amin'ny alalan'ny lahatsary, na vakiana ao amin'ny Facebook na Twitter ny valandresaka nifanaovana nandritra ny TEDxSkopje ny ny mombamomba azy. Raha tsy tratranao intsony moa izany dia havoaka ao amin'ny vohikala TEDxSkopje ny lahatsary.
Nahombiazana ihany ny valandresaka. Tsara dia tsara ny fanatontosana, voavaha haingana ny olana ara-teknika madinidinika. Nahaliana ny fisafidianana ireo nomena fitenenana, tamin'ireo lohahevitra isan-karazany izay nozaraina ho roa. Ny fizarana voalohany moa niompana kokoa tamin'ny teknolojia raha nitodika nankany amin'ny fanabeazana, ny antony mandrisika sy ny aingam-panahy ho amin'ny famoronana kosa ny fizarana faharoa.
Nahatratra arivo ny mpijery tamin'ny alalan'ny mivantana an-dahatsary nanerana izao tontolo izao, ka ny ankamaroany dia avy ao Makedonia, izay narahan'i Frantsa sy i Etazonia.
Ny lalànan'ny lanonana moa dia mandrara ny fakana sary sy ny fandraketana ankoatra ireo voatendry ho mpaka sary ofisialy. Iray amin'ireny i Martin Dimitrievski izay namoaka lahatsary fohy momba ity hetsika ity.
Araka ny efa notaterina tato amin'ny GVO [anglisy] ihany dia nisy fifandirana an-tserasera rehefa nisy ny lazaina ho mpandray anjara tsy nahazo valiny [fanamafisana] avy amin'ny fisoratany anarana. Voavaha moa ny ankamaroan'ny olana noho ny ezaka nataon'ny mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny vaomieran'ny fikarakarana niresaka ampahibemaso ity raharaha ity tao amin'ny diniky ny vondrona [MKD] notarihina tamin'ny alalan'ny agregatera Ping.mk.
Tsy nifarana ny resaka an-tserasera, rehefa nifarana ny hetsika, tamin'ireo fankasitrahana avy amin'ny mpandray anjara nalefany tamin'ny Twitter sy ny Facebook mbamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny sasany [MKD] hoe ‘ok, voarainay, midìna amin'ny soavalinareo avo’. Ao amin'ny andian-tsary mampihomehy [MKD] ahitana an'i Steve Jobs sy i Bill Gates mifanontany izay hanatrika ny lanonana ihany koa aza moa ny iray amin'ireo nikiry niresaka nandritra ny fotoam-panomanana Zuberot, ka nanaovany fehinteny fa farafaharatsin naheno azy Zuberot ireo.
Amina tatitra matotra kokoa no anoratan'ny [MKD] iray amin'ireo nanolo-tena hikarakara, Novica Nakov, ao amin'ny bolongany ny fahasamihafan'ny tanjona an-tserasera misy eo amin'ny TEDxSkopje sy ny tetikasa iray hafa nandraisany anjara – fananganana ny Politikam-pirenena momba ny Rindrambaiko Malalaka/Afaka sy ny Open Source [MKD] amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena:
Tsy hita intsony izay tsy mahasamy hafa ny TEDxSkopje sy ny politikam-pirenen'ny FLOSS.
Ny voalohany omanin'ny tsy miankina (na olo-tsotra), tohanan'ny fikambanana na orinasa tsy miankina amin'ny ankapobeny (ankoatra ny Ivokolontsain'ny Tanora). Tsy hoe tsy azon'ny hafa atao, mety hisy ny hafa tahaka azy. Tsy tena misongadina raha jerena eo amin'ny fiarahamonina masedoniana – ankoatra ny “kabary” fanao araka ny TED izay mety hampakatra ny sandan'ny resaka eo amin'ny olona, tsy dia misy zavatra lazaina loatra. Ary tamin'ny ankapobeny ny TEDxSkopje dia narahin'ny olona (an-tserasera) tsy an-kiala sy manontolo […]…
Ny faharoa kosa indray dia nomanin'ny fanjakana (na daholobe) , ahitana ny Minisiteran'ny fampahalalam-baovao, Metamorphosis Foundation ary ny Free Software Macedonia (Rindrambaiko Afaka Makedonia) tamin'ny fanatontosana, sy ireo mpandray anjara avy amin'ny anjerimanontolo sy ny fandraharahana. Isafatsiroa ny fanomanana ny toa itony. Tsy hisy ny andiany faharoa amin'ny herintaona. Raha lany dia fandraisana anjara lehibe amin'ny fananganana ny tontolon'ny fampahalalam-baovao, indrindra eo amin'ny lafiny fangaraharana amin'ny politikan'ny TIC eo anivon'ny sampan-draharaham-panjakana sy ny fifandraisany amintsika rehetra. Ny politika dia mety hampivelatra ny hoavin'ny TIC eto amin'ity firenena ity ary raha mahomby dia mety ho lohahevitra lehibe amin'ny TEDx Talk manaraka. Nefa moa tsy mbola mahaliana ny mpiserasera aloha hatramin'izao (eny fa na dia imbetsaka aza ry zareo no nasaina).
Amin'izay fotoana izay, dia eritrereto raha ireo olona manana fari-pahaizana ambony nirotsaka an-tsehatra tanteraka hiresaka momba ny TEDxSkopje rehetra no mitondra anjara biriky amin'ny fananganana ny politikam-pirenena momba ny FLOSS, dia ho azonao hoe nahoana aho no nanoratra ity.
Saingy hatramin'ny nahampahay toekarena ahy dia ampahatsiahiviko anareo fa tia tena ny olona. “Izay mahasoa ny tena aloha voalohany indrindra” – ary heverin'ny maro fa misy zavatra hahazoany tombontsoa ao amin'ny TEDxSkopje.
Farany, amin'ny maha-mpikarakara ny TEDxSkopje ahy, dia azoko lazaina fa afa-po aho na dia maro aza ny zava-nosedraina. Saingy amin'ny [maha-olompirenena mandoa hetra isan-taona ahy] no nahatery ahy hampahatsiahy anareo fa misokatra ho anareo rehetra mandrakariva ny fampakarana avo ny e-ninoninona iarahana amin'ny fanjakana.